360 Degree ကြည့်နိုင်ပြီး Transparent ဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ Samsung ရဲ့ OLED Display
18 Nov 2018 . 3:58 PM
ဒီတစ်လထဲ အထူးဆန်း အနေနဲ့ Samsung ဆီကမြင်တွေ့လိုက်ရတာက Flexible OLED Display ပါ၊ အခုချိန်မှာ နမူနာအဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုပေမယ့် Samsung ကြောင့်ပဲ Foldable Smartphone ဆိုတာက ရေပန်းစားလာတော့မယ် ဆိုတာဗေဒင်မဟောလည်း သိနေရပါပြီ။
Samsung Galaxy F (Foldable) Smarphone
ဒါပေမယ့်လို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိနေတဲ့အချက်က 2014 ကတည်းက Foldable Concept ကို ချပြဖူးတယ်၊ အဲ့ချိန်ကတည်းက ထုတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ တမင်ငြိမ်နေခဲ့တာလား? အခု ဘယ်သူ (Huawei ၊ LG ) က Foldable Phone ထုတ်မယ်လို့ သတင်းထွက်လာခါကျမှ ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ဆွံ့အသွားစေတာလား?
OLED ဆိုတဲ့နည်းပညာကို LG မွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် Samsung နည်းပညာတွေက ပိုပြီး တစ်ခေတ်ဆန်းနေပြီ၊ အခုဆိုရင် Flexible OLED Panel တွေ့နေပြီ၊ အရင်တခါကလည်း Military Standard ထက်တောင် မာကျောပါတယ်ဆိုတဲ့ Bendable OLED Panel ၊ ဒီတခါကျပြန်တော့ Cylindrical OLED Display တဲ့။ Display နည်းပညာထဲ ဘယ်လိုမှ လက်လမ်းမမီနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဟာ Samsung လို့ ပြောရင်လက်ခံမှာလား?
Samsung’s Unbreakable OLED Panel
IceUniverse ပြောကြားချက်အတိုင်းသာဆိုရင် OLED Panel အသစ်က TV ၊ Car Windscreen ၊ Smart Speaker နဲ့ တခြား Display Application တွေမှာ အသုံးချလာမယ်လို့ သိရတယ်။ ပုံစံက LG Display ရဲ့ Rollable OLED နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် Samsung ဟာက လုံးဝ Transparent အနေထား၊ ဖွင့်ထားပြီး အရောင်တွေပေါ်နေမှ တစ်ဖက်ကို မမြင်ရမှာ၊ ဒါကြောင့်လည်း Car Windscreen မှာ သုံးမယ်လို့ ပြောနေတာကိုး။
Cylindrical Transparent Display
နောက်ပြီး Cylindrical (စလင်ဒါ) ပုံစံကွေးထားနိုင်လို့ ရုပ်ပုံတွေကို 360 Degree အနေထားတိုင်း ကြည့်ရှုနိုင်မယ်၊ ဒီလို အထင်ကြီးစရာ OLED Panel အသစ်ကို ဘယ်လိုအနေထားနဲ့ ထုတ်လုပ်မယ် အတည်တကျ မသိရသေးပေမယ့် ရုပ်ရှင်ထဲကလို Display အရှင်ကြီးတွေ၊ လေထဲမှာပဲရှိနေပြီး ရုပ်ပုံတွေ ဖော်ပြနေတာမျိုး Samsung ဆီက မြင်တွေ့ရတော့မှာလား?
360 Degree ကွညျ့နိုငျပွီး Transparent ဖွဈနမေယျဆိုတဲ့ Samsung ရဲ့ OLED Display
ဒီတဈလထဲ အထူးဆနျး အနနေဲ့ Samsung ဆီကမွငျတှလေို့ကျရတာက Flexible OLED Display ပါ၊ အခုခြိနျမှာ နမူနာအဆငျ့ပဲ ရှိသေးတယျဆိုပမေယျ့ Samsung ကွောငျ့ပဲ Foldable Smartphone ဆိုတာက ရပေနျးစားလာတော့မယျ ဆိုတာဗဒေငျမဟောလညျး သိနရေပါပွီ။
ဒါပမေယျ့လို့ ကြှနျတျောစဉျးစားမိနတေဲ့အခကျြက 2014 ကတညျးက Foldable Concept ကို ခပြွဖူးတယျ၊ အဲ့ခြိနျကတညျးက ထုတျနိုငျရဲ့သားနဲ့ တမငျငွိမျနခေဲ့တာလား? အခု ဘယျသူ (Huawei ၊ LG ) က Foldable Phone ထုတျမယျလို့ သတငျးထှကျလာခါကမြှ ငါလုပျနိုငျတယျဆိုပွီး ဆှံ့အသှားစတောလား?
OLED ဆိုတဲ့နညျးပညာကို LG မှေးဖှားခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ Samsung နညျးပညာတှကေ ပိုပွီး တဈခတျေဆနျးနပွေီ၊ အခုဆိုရငျ Flexible OLED Panel တှနေ့ပွေီ၊ အရငျတခါကလညျး Military Standard ထကျတောငျ မာကြောပါတယျဆိုတဲ့ Bendable OLED Panel ၊ ဒီတခါကပြွနျတော့ Cylindrical OLED Display တဲ့။ Display နညျးပညာထဲ ဘယျလိုမှ လကျလမျးမမီနိုငျတဲ့ ကုမ်ပဏီဟာ Samsung လို့ ပွောရငျလကျခံမှာလား?
IceUniverse ပွောကွားခကျြအတိုငျးသာဆိုရငျ OLED Panel အသဈက TV ၊ Car Windscreen ၊ Smart Speaker နဲ့ တခွား Display Application တှမှော အသုံးခလြာမယျလို့ သိရတယျ။ ပုံစံက LG Display ရဲ့ Rollable OLED နဲ့ ခပျဆငျဆငျလို့ ပွောနိုငျပမေယျ့ Samsung ဟာက လုံးဝ Transparent အနထေား၊ ဖှငျ့ထားပွီး အရောငျတှပေျေါနမှေ တဈဖကျကို မမွငျရမှာ၊ ဒါကွောငျ့လညျး Car Windscreen မှာ သုံးမယျလို့ ပွောနတောကိုး။
နောကျပွီး Cylindrical (စလငျဒါ) ပုံစံကှေးထားနိုငျလို့ ရုပျပုံတှကေို 360 Degree အနထေားတိုငျး ကွညျ့ရှုနိုငျမယျ၊ ဒီလို အထငျကွီးစရာ OLED Panel အသဈကို ဘယျလိုအနထေားနဲ့ ထုတျလုပျမယျ အတညျတကြ မသိရသေးပမေယျ့ ရုပျရှငျထဲကလို Display အရှငျကွီးတှေ၊ လထေဲမှာပဲရှိနပွေီး ရုပျပုံတှေ ဖျောပွနတောမြိုး Samsung ဆီက မွငျတှရေ့တော့မှာလား?